ဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့ ဘဏ်ကိုသွားဖို့မလိုတဲ့ခေတ်ကို ရောက်နေပြီလား? – MyStyle Myanmar
ဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့ ဘဏ်ကိုသွားဖို့မလိုတဲ့ခေတ်ကို ရောက်နေပြီလား?
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်း ဘဏ်စာအုပ်ရှိနေဖို့၊ ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာ ပုံမှန် ငွေထည့်ထားနိုင်ဖို့က လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အများဆုံးသောလူတန်းစားတွေက ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်နေပြီး ပုံမှန်ရတဲ့လစာက နေ့စဉ်အစားအသောက်ဖိုး၊ နေထိုင်ရေးနဲ့ အခြားသောလူမှုရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ ပုံမှန်သုံးစွဲနေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ဝန်ထမ်းတွေကို လစာပေးတဲ့အချိန်မှာ လွယ်ကူစေဖို့ ဘဏ်စာအုပ်၊ ATM Card တွေထဲကို ထည့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဝန်ထမ်းအများစုက တစ်လစာကို အကုန်မသုံးဖြစ်မှသာ ဘဏ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံကျန်တတ်ပေမယ့် ပုံမှန်ကတော့ လစာထုတ်ရက်ဆိုတာနဲ့ ဘဏ်တွေမှာ၊ ATM စက်ရှေ့မှာ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းပြီး လစာထုတ်နေကြတာကို ကျွန်တော်တို့ မျက်မြင်ပဲကိုယ်တွေ့ပဲဖြစ်မှာပါ။
အဲ့ဒါဆိုရင် ဘဏ်စာအုပ်တွေ၊ ATM Card တွေ ရှိတယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝမှာ အဆင်ပြေပြီလားလို့မေးရင် အလုံးစုံအဆင်မပြေသေးဘူးပဲပြောရမှာပါ။ ဘဏ်စာအုပ်တွေ၊ ATM Card တွေရှိနေပေမယ့် ပုံမှန်အပြင်သွားရင် ဘဏ်စာအုပ်ပါ အမြဲတမ်းသယယ်သွားတဲ့သူရှားပါးတာ၊ ပိတ်ရက်တွေမှာဆိုရင်လည်း ဘဏ်ပိတ်တဲ့အတွက် ငွေထုတ်မရတာ၊ အရေးကြီးအချိန်တွေမှာ ဘဏ်မှာလူကျပ်ရင် စောင့်ဆိုင်းရတာတွေက ဖြစ်နေဆဲပါ။ ATM Card ရှိတာကတော့ ဘဏ်စာအုပ်နဲ့ယှဉ်ရင် အဆင်ပြေလာတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ဘဏ်ရဲ့ ATM Card ကို လိုက်ရှာနေရတာ၊ တခါတလေ လိုင်းကျနေတတ်သလို၊ စက်ထဲမှာ ငွေသားမကျန်တော့လို့ ထုတ်လို့မရတာတွေ အမြဲဖြစ်ဖူးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ပုံမှန် ကဒ်ထဲငွေထည့်ထားတာက ငွေစုဖို့ထက် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေသားအများကြီးမထည့်ထားချင်လို့ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ ATM Card တွေ၊ ဘဏ်စာအုပ်တွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Mobile Wallet တွေပါ။
အခုခေတ်မှာ လူတိုင်း ဘဏ်စာအုပ်၊ ATM Card တွေမရှိရင်တောင်မှ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံးကတော့ ကျိန်းသေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး ဖုန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကနေပဲ Facebook အသုံးပြုသလို Application ကနေ တစ်ဆင့် ငွေသားအသုံးပြုရတဲ့ ငွေပေးချေမှုတွေ၊ ငွေလွှဲတာတွေ၊ ဖုန်းဘေထည့်တာတွေ အကုန်နီးပါးကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို Mobile Wallet တွေထဲမှာ ပြင်ပကနေ သီးခြားဆောင်ရွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ooredoo Myanmar ရဲ့ M-ပိုက်ဆံ စနစ်က အခုနောက်ပိုင်း အသုံးပြုရတာ တော်တေ်ာလေးကို အဆင်ပြေလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောရသလဲဆိုရင် M-ပိုက်ဆံ ကို အသုံးပြုဖို့က Ooredoo ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းက Android ဆိုရင် Play Store, iOS ဆိုရင် App Store ကနေ Download လုပ်ပြီး ပုံမှန် Application တစ်ခုကို အသုံးပြုသလိုသုံးနိုင်လို့ပါ။ လုံခြုံရေးအရလည်း သီးခြား PIN Password တစ်ခုထားပြီး ကိုယ့်ဖုန်းကို တခြားသူတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင် PIN မသိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတာက သဘောကျစရာပါ။
ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် ငွေလွှဲတာတွေ၊ ငွေပေးချေမှုတွေ၊ ဖုန်းဘေဖြည့်တာတွေအကုန်လုပ်လို့ရပြီးတော့ ကိုယ်ရဲ့ M-ပိုက်ဆံ Account ထဲကို ငွေပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Application ထဲက “ကိုယ်စားလှယ်ရှာဖွေရန်” ကနေ မှတ်ပုံတင်ယူသွားပြီး ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးက M-ပိုက်ဆံ ကိုယ်စားလှယ်ဆီမှာ ပိတ်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြားရက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေသွားဖြည့်လို့ရပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီတော့ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဘဏ်မှာ ငွေစုနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ သာမန်အသေးသုံးတွေအတွက်ပဲ ATM Card တွေ၊ ဘဏ်စာအုပ်တွေကို သုံးနေတယ်ဆိုရင် အခု M-ပိုက်ဆံ လိုမျိုး Mobile Wallet တွေက စမ်းသပ်သုံးစွဲသင့်တဲ့ Application တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရတော့ စမ်းကြည့်ကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2018-12-20T21:29:01+06:30November 15th, 2017|Lifestyle, အထှထှေေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|